Iwo mahotera matanhatu akanakisa muCopenhagen muna 6 | Kufamba Nhau
Iwo mahotera matanhatu akanakisa muCopenhagen
Lola curiel | | Denmark, General
Copenhague nderimwe remaguta anozivikanwa muDenmark. Iyo mhepo inofemerwa mumigwagwa yayo uye huwandu hwe zvirongwa zvinopihwa ita guta reDenmark sarudzo inokwezva yekushandisa mazuva mashoma pazororo. Nekudaro, sezvazvinowanzoitika mune mamwe maguta ane akakwirira ekushanya, tsvaga hotera yakachipa isiri kure zvakanyanya nepakati zvinogona kuva hope dzinotyisa. Naizvozvo, isu tinokupa iwe runyorwa rwe 6 akanakisa mahotera muCopenhagen, kusanganisira pekugara pakachipa uye padyo nepakati peguta.
1 Hotera CitizenM Copenhagen Radhuspladsen
2 Jenareta Copenhagen
3 GutaHub Copenhagen
4 Aperon Apartment Hotera
5 Iyo Wakeup Copenhagen- Bernstorffsgade
6 Hotel Ottilia naBrøchner Mahotera
Hotera CitizenM Copenhagen Radhuspladsen
Yakanakisa sarudzo kana iwe uchitsvaga mhando uye mahotera padyo nepakati peCopenhagen. Inowanikwa Mukati meguta, hotera CitizenM Copenhagen Radhuspladsen inzvimbo inonakidza kwazvo kana iwe uchitsvaga nyaradzo pamutengo unodhura. Rangarira kuti Copenhagen harisi guta rakachipa. Nekudaro, chiyero cheiyi hotera, yehotera ina-nyeredzi, zvine musoro uye kudya kwemangwanani kunosanganisirwa. Ukuwo, nzvimbo yaro yakanaka kana iwe uchida kuenda kunoona nzvimbo usingashandise nguva yakawandisa pakutakura. Ihotera iri pamamita mazana matanhatu kubva kuTivoli Gardens, imwe yemapaki ekare eEuropean ayo pasina mubvunzo achave mamwe emapoinzi ekushanya kwako kuguta.
Hapana mubvunzo yakanakisa ye CitizenM Copenhagen Radhuspladsen ndiko kushongedza kwayo kwazvino uye kune mavara izvo zvinounza vashanyi vayo padhuze neDanish art. Kufamba inzira yakanaka kwazvo yekubvisa pane zvakajairwa, kana isu tichifamba tinotsvagawo kudzidza zvinhu zvitsva nekubatana nedzimwe tsika. Masvingo ehotera iyi Ivo vakafukidzwa nemifananidzo uye murals neveDanish maartist. Nekudaro, kugara kwevashanyi kunova chiitiko chinovatendera kuti vadzidze zvakawanda nezvetsika yeDenmark.
Iyo yakanaka sarudzo kana iwe uchitsvaga hotera dzakachipa muCopenhagen nehusiku husiku. Iyo jenareta Copenhagen inzvimbo yekugara yakakwana gente joven uyo anoda kugara munzvimbo yakagadzirirwa kugutsikana uye kunakidzwa. Iyo pekugara ine bhawa huru yeusiku Mune izvo zviitiko, kuridza karaoke uye DJ kurongeka, inzvimbo yakanaka yekuva nemabiko, kusangana nevamwe vafambi uye kunakidzwa nemumhanzi wakanaka. Iyo inzvimbo kwete chete yekurara, iwe unogona kuita hwakawanda hupenyu mukati mehostel.
Nekudaro, kana iwe uchida kuenda kunze, famba uye uzive iro guta, iyi pekugara iri zvakare yakanaka sarudzo. Inongori maminetsi manomwe kubva kuKongens Nytorv metro chiteshi uye padhuze ne Frederiks Kirke (iyo Marble Church) uye Amalienborg Palace, zvakakosha mukushanya kwako kuguta.
Makamuri anodhura kwazvo akagovaniswa, chimwe chinhu chingave chinetso kana usati wajaira kurara mumahostela erudzi urwu. Nekudaro, kune avo vanoda kuvanzika zvakanyanya, iyo hostel inopawo mukana wekuchengetedza dzimba dzevamwe. Imwe mukana weGenator Copenhagen ndeyekuti kugamuchirwa kwakavhurwa maawa makumi maviri nemana, saka hauzove nedambudziko kana uchifanira kuita iyo Pinda kana the buda kwayedza.
Sarudzo yakanaka kune avo vari kutsvaga mahotera anodhura muCopenhagen ine yakanakisa sevhisi. GutaHub Copenhagen ihotera yemazuva ano iyo inomiririra kutariswa kwemunhu vanopa kune vatengi vavo. Mahotera mazhinji eCopenhagen akasanganisira tekinoroji mumazuva avo ezuva nezuva ekuvandudza masevhisi avo, vamwe vanokweretesa mapiritsi kuvashanyi vavo uye kunyange kuvabvumidza kudzora mwenje mukamuri kuburikidza nemhando idzi dzemidziyo.
Nekudaro, iro GutaHub Copenhagen chikumbiro chiri nani. Kuburikidza netekinoroji ivo vakakwanisa kuwedzera mabasa avo kupfuura madziro ehotera. Vakagadzira app iyo vashanyi vanogona kuisa pane yavo nharembozha mahara. Kubva pane ichi chishandiso, vatengi vanogona kutaura uye kubata vehotera vashandi. Chishandiso chakakura kukumbira mazano uye kurudziro uchiongorora nzira dzese dzeguta. Uye zvakare, iwo makamuri ane stereo iwe yaunokwanisa kubatana nayo kuburikidza neBluetooth, chimwe chinhu chinokosheswa kubvira, kazhinji, isu hatitakure masipika musutukezi yedu uye ndicho chinhu chaicho chatinowanzopotsa patinofamba.
Ihotera iri rakabatana kwazvo nepakati, ingori 550 metres kure ndiyo Frederiksberg Allé metro chiteshi, saka unenge usina chinetso kusvika kunzvimbo dzevashanyi vanofarira. Nekudaro, kana iwe usinga nzwe kuda kutora zvifambiso zveruzhinji, yeuka kuti Copenhagen ndiro guta remabhasikoro, anogona kubhadharwa chero kupi zvako! Nekukwiridzira zvishoma, kubva kuCityHub Copenhagen unogona kusvika kunzvimbo dzakamiririra seNational Museum yeDenmark kana iyo Frederiksberg Iva nemapindu mumaminitsi asingasviki gumi.
Aperon Apartment Hotera
Zvese zvakanaka zvemba muhotera muCopenhagen. Dzimwe nguva patinofamba, hatinzwe kuda kushandisa kugara kwedu kwese tichidya kubva kuresitorendi kuenda kuresitorendi, kunyanya kana tisingade kushandisa mari yakawanda uye tiri muguta rinodhura seCopenhagen. Kana iwe uchida kuva nesarudzo yekubika chikafu chako pachako kana kana iwe uchingoda kuve nenzvimbo dzakawanda kupfuura dzinojairwa imba yemahotera, iyo Aperon Apartment Hotera isarudzo yakanaka kwazvo kwauri. Mumakamuri ayo madiki ane akacherechedzwa manyorerwo echiDanish unogona kunakidzwa zvese zvakanaka zvemba, pasina kurasikirwa nezvakanakira muhotera.
Nekudaro, ine kicheni yazvino, yakashongedzerwa zvakakwana uye ine imba yekutandarira yakakura iwe yaunogona kuzorora mushure mezviitiko zvako muguta. Iyi sarudzo inonakidza kwazvo kana iwe uchifamba nevana uye pfungwa yekurara pamwe chete mukamuri imwechete haina kukufadza zvakanyanya. Zvakare, maratidziro edzimba acho akanaka. Iwo makamuri akasiyana anoshanda chaizvo uye anotonhorera, iwo akazara nemahwindo ayo anotendera iwe kunakidzwa neakanakisa echisikirwo mwenje.
Panyaya yenzvimbo, iyo Aperon Apartment Hotel iri muIndre Neruwa, iyo yepakati peCopenhagen, saka iwe unenge uine nzvimbo dzese dzekufarira pamunwe wako. Iyo inozivikanwa Rosenborg castle ingori mazana manomwe emamita kure, uye iwe unogona kufamba kuenda kuNørreport Station mune isingasviki maminetsi mashanu.
Iyo Wakeup Copenhagen- Bernstorffsgade
Iyo yekugara yakanaka kune avo vanoenda kuCopenhagen pane bhizinesi. Iyo Wakeup Copenhagen- Bernstorffsgade iri mu pakati peguta, mudunhu reKøbenhavn. Nzvimbo yaro yakanaka kwazvo. Iyo iri padyo padyo nenzvimbo dzinofarira vashanyi uye mune nzvimbo izere nehupenyu. Munzvimbo dzakapoteredzwa nehotera, iwe unowana asingagumi mabhawa, maabhu uye maresitorendi ekudya, kunwa uye kunyorovesa mamiriro emuzinda weDanish.
Nekudaro, chii chinoita kuti hotera iyi irondedzero yematanhatu emahotera akanakisa muCopenhagen muna 6 haisi nzvimbo yayo chete. Iyo Wakeup Copenhagen- Bernstorffsade Ndicho pekugara pakanakira avo vari kuenda kuguta pane bhizinesi. Nzvimbo dzayo dzakajairika dzakakomberedzwa nemahwindo mahombe uye mahwindo mahombe ayo anotendera iwe kunakidzwa ne zvinotyisa maonero eguta. Idzi nzvimbo dzine nzvimbo dzakagadzirirwa zvakanangana nebasa. Vane bussines pakati, nemakomputa ekushandisa mahara, uye imwe inopa yakawanda nhamba yenzvimbo dzakagoneswa kushanda zvakanaka.
Iwo makamuri ndeemazuva ano aine dhizaini dhizaini uye kunyangwe iwo asina kunyanyo kukura, iwo akakwana saizi. Ivo vane dhesiki diki, imwe poindi inofarirwa kana iwe usiri mutaundi kuzorora. Uye zvakare, nekutenda padyo nechiteshi cheCopenhagen, kune makamuri ane zvishoma maonero egungwa.Ndiani asingade kunakidzwa neiyo panoramic maonero paanomuka?
Hotel Ottilia naBrøchner Mahotera
Dhizaini uye 360º maonero eguta reCopenhagen, hotera yakanaka yezviitiko zvakakosha. Chekupedzisira, iyo pekugara iyo inokodzera kuvhara urwu runyorwa rwe 6 akanakisa mahotera muCopenhagen muna 2020 ndiyo Hotera Ottilia neBrøchner Hotels. Kunyangwe chiri chokwadi kuti haina kudhura uye yepakati sedzimwe, inzvimbo ine runako rwakawanda, yakakodzera nguva dzakakosha.
Aesthetically, hotera yacho inoshamisa. Yakavakwa mune yaive, kweanopfuura makore zana nemakumi masere, iyo inonyanya kuzivikanwa doro rekubika muDenmark, iyo Carlsberg. Chimiro chekare chefekitori chinobatana zvisina musanganiswa nezvinhu zvekushongedzwa kwazvino dhizaini. Zvese zvese zvefekitori zvakachengetwa. Kunyangwe pafaçade, mukuremekedza 64 nhoo dzegoridhe dzaibuda pamadziro apo doro raive rakamira, vakaisa mamwe mahwindo edenderedzwa.
Ihotera iyi inopa masevhisi mazhinji mukati mezvivakwa zvacho: sevhisi yekuhaya mabhasikoro, spa, jimi, kunyange bhawa neresitorendi. Uye zvakare, zuva rega rega, hotera inoronga a nguva inofadza mune waini mahara kune vese vashanyi vayo, chiitiko chakanakidzwa chekutandara uye kuzorora mushure mezuva refu rekuona nzvimbo.
Pasina kupokana, iyoresitorendi ndiyo yakanakisa yehotera. Inowanikwa pauriri hwepamusoro pechivakwa ine imwe yeakanyanya kushamisa maonero eCopenhagen. Nekudaro, kubva pamatafura avo unogona kuravira chikafu chinonaka cheItaly, uchinakidzwa nekuona 360º yeguta guru reDanish. Icho hachisi icho chinonakidza kusangana?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Iwo mahotera matanhatu akanakisa muCopenhagen